‘द लिडर’ रियालिटी शोमा मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडा निर्णायक —
१ चैत्र २०७६, शनिबार ०८:४० admin	0 Comments
१ चैत २०७६, शनिवार, काठमान्डौ / चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले केही समय अघि रियालिटी सो ‘द लिडर’को घोषणा गरेका थिए । न्युज २४ टेलिभिजन बाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रमको निर्णायकका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, रवीन्द्र मिश्र, प्रदीप गिरी, प्रदीप नेपाल रहेको जानकारी दिइएकी थियो ।
उनीहरू सँगै कार्यक्रमको निर्णायक को रूपमा पूर्व मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडा पनि रहने भएकी छिन् ।साथै अडिसन जजको रूपमा रमेश खरेल र शृङ्खला खतिवडा रहने पक्का भएको छ । शोको पहिलो अडिसन चितवनबाट सुरु हुन्छ । कार्यक्रमको प्रस्तोताको रूपमा रवि लामिछाने रहने छन् । यस कार्यक्रमका विजेताले काठमाडौँमा एक सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट, कार, २० लाख नगद र राजनीतिमा नेतृत्व लिने अवसर पाउने छन् । भिडियो हेर्नुहोस !
स्रोत : cinepati
यो पनि पढ्नुहोस ! ‘रंङ्गेहात भेटाउँदा पनि मौका दिएकी थिएँ, म माथि नै विश्वासघात भयो’- दीपिका पादुकोण
फागुन ३०, काठमाडौँ । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अहिले रणवीर सिंहकी श्रीमती हुन् । उनीहरू खुसीसाथ आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेका छन् । यद्यपि समय यस्तो पनि थियो जब दीपिका रणवीर कपुरको प्रेममा पागल थिइन् । उनले रणवीरको नाममा आफ्नो गर्धनमा ट्याटु समेत खोपेकी थिइन् । चारैतिर उनीहरूको प्रेमको चर्चा हुन्थ्यो ।
दीपिका आज जीवनमा निकै अगाडी बढिसकेकी छिन् तर त्यो समय अझै पनि बिर्सन सकेकी छैनन् जुन समय कसैलाई निकै भरोसा र प्रेम गरेकी थिइन् । र उसैले उनको दिल तोडिदिएको थियो । एक अन्तर्वार्तामा दीपिकाले नाम नलिईकन आफ्नो एक्स बोइफ्रेण्ड अर्थात् रणवीर कपुर सँगको प्रेम कहानी खुलेर बताइन् । दीपिकाका अनुसार जब उनीहरू सम्बन्धमा थिए, उनले कहिल्यै चिट गरिनन् । न केही कुरा लुकाइन् । तर दीपिकालाई भने रणवीरले चिट गरेका थिए , उनी यस हदसम्म रणवीरको प्रेममा थिइन् कि उनले दोस्रो अवसर पनि दिइन् । त्यसैले पनि ब्रेक अप हुँदा उनी डि’प्रेसनमा पुगिन् ।
दीपिका भन्छिन्– ‘जब मैले उसको झुट पक्डिएकी थिएँ, सुरुमा लाग्यो हाम्रो सम्बन्धमा केही गडबडी छ । पछि महशुष भयो कि धोका दिने उसको स्वभाव नै थियो । विश्वास’घात भयो ममाथि ।’
यो पनीः दुब्लो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
← वुहानकी डाक्टरले गरिन् यस्तो खुलासा- भन्छिन् ‘हामीलाई कोरोनाबारे विश्वलाई नबताउन ध’म्की दिइयो’
नवजात शिशुमा कोरोना भा’इरसको स’ङ्क्रमण भेटियो →
दुई वर्षदेखि प्रेममा गायिका इन्दिरा जोशी, प्रेमीको हात समाएको तस्वीर राख्दै लेखिन् यस्तो…
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:२० admin	0
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:१० admin	0